UStesha Malikova waba ngumdlali weqonga, ividiyo
Kulo nyaka, intombi kaDima Malikova iphumelele esikolweni esiphakeme. Emva kobomi bukaStephanie benomdla wokubukela abantu ababalelwa kwisiqingatha sezigidi zabantu - njengabalandeli abaninzi basayina i-Instagram girls.
Kubantwana babantu abaziwayo bahlale beqwalaselwe ngokukhethekileyo. Yiyiphi abantwana abaqhelekileyo abanakho ukukwazi ukuyihlawula ingaba yinto yokukhwabanisa kwimeko ye-stellar seed. Ngoko ke, i-intanethi iyabuyiswa, ixoxa ngempumelelo yeStesha, xa evule ngokunyanisekileyo kwiimpawu ze-microblogging zokuhlolwa kweemathematika nolwimi lwesiRashiya.
Nangona ayengaziwa ukuba yunivesithi ithumele amaxwebhu aseSeshesh Malikov, kodwa emva kweemviwo le ntombazana yahlala eYurophu yakudala.
USteshu Malikov wayefaniswa nentombazana yaseTurgenev
Njengoko intombi yomntu odala, uStefanania Malikova unokuzifumanisa kwiyunivesithi ethile. Namhlanje intombazana yabonisa ababhalisile izakhono zakhe zokwenza ngokuthumela ividiyo emfutshane kwiblogi yakhe. Umhlobo kaStefanania Malikova Huseyn Hasanov uyaziwa kwi-Intanethi njengombhali weentengiso ezihlaziyileyo. Ngomfanekiso olandelayo umfana othile wamema intombi yomculi othandwayo.
Kwividiyo encinci, isihloko esizikhethelayo sibonakalisiwe. Umbhali weklip eqhathaniswa namantombazana kunye namantombazana enkulungwane yokugqibela. Ngokutsho kweHuseyn, abafana benza izikhundla ezahlukileyo kummeli abalungileyo, abakhokelwa yimbonakalo yabo. Kule vidiyo uHuseynov Stefania wadlala indima yentombazana ethobekileyo kwixesha elidlulileyo:
Abathengi baStesha baxabisa italente yakhe yomdlali, badumisa ubuhle bayo bemvelo:
ola_space Into efanelekileyo yeTurgenev intombi!
nikitina.varambler.ru Ndiyaqonda ukuba ufuna ukuba ngumdlali weqonga?
77dimitriy Ulungelelanise ngakumbi kwindima kuneHuseyn, intombazana yaseTurgenevskaya ngqo
tysh_marina Uya kudlala indima ye-100%. Ngoku ubuhle obunqabileyo bendalo. EMoscow
vladislava_turchenko Intombazana enhle inembonakalo yendalo
UValery Meladze uyigubha iminyaka engama-50
UNicita Presnyakov wancoma intombazana yakhe ethandekayo ngokuphumelela esikolweni
Ukuvulwa kweTonga: yiyiphi i-Melanya Trump ebeka kuyo, ifoto
UValeria noIosif Prigozhin baqhekeza?
U-Natalia Ionova wakhulisa umgangatho wenkcubeko, ifoto
I-Assortment kunye neepropati zabathengi
Ukholifula ngeeshizi kunye ne-mayonnaise
Ithemba leMedia - I-Pelageya ukhulelwe, ifoto
Imigaqo yesondlo kwimpilo yeenyawo zakho
I Easter Bread Hare
Akunakwenzeka ukuba ufunge ngendoda?
I-styles "umsila" kuyo yonke into
Abathandekayo bathandekayo, fundani indlela yokwenza ubuquzi bezobugcisa ngokwakho
Izesekeli ze style Disco 70
Iimpawu ezifudumele zeentsuku ezibandayo: yintoni eya kuba yindalo ebusika 2015-2016
"Bukovina Nut" ikhekhe
Umlingane wam wenqabe ukulala ngesondo ngaphambi komtshato
Mayelana neenzuzo zeemveliso zobisi
Indima yabasetyhini kwintsapho yanamhlanje